फेसबुकबाट मायामा लठ्ठै पार्ने ‘सुन्दरी’ त पुरुष पो रहेछन्! – Sunaulo Post
मुख्य पृष्ठ /समाचार/फेसबुकबाट मायामा लठ्ठै पार्ने ‘सुन्दरी’ त पुरुष पो रहेछन्!
काठमाडौं : सामाजिक सञ्‍जाल फेसबुकमा महिला बन्दै ठ’गी गरेर हिँड्ने एकजना पुरुष प’क्राउ परेका छन्। फेसबुकमा एकाउन्ट खोलेर गुगलबाट महिलाको आकर्षक फोटो हाल्दै ठ’गी गर्ने कैलालीको महोन्याल गाउँपालिका-३ का २७ वर्षीय धनबहादुर शाहीलाई प्रहरीले प’क्राउ गरेको हो।
महिलाको नामबाट खोलिएको फेसबुक आइडीबाटै च्याट गर्दै प्र’लोभन देखाइ, माया जा’लमा पारी उनले ठ’गी गर्ने गरेको प्रहरीले जनाएको छ। त्यसक्रममा शाहीले विभिन्‍न अ’श्लील फोटोको माध्यमबाट ब्ल्या’क मेल गर्ने गरेको पनि पत्ता लागेको छ।
उनले च्याटमै ब्ल्या’क मेल गरेर आइएमईबाट रकम माग्दै नदिएमा आफन्तजन, साथीलाई समेत फोटो पठाएर बे’इज्जत गरी दिन्छु भन्‍ने गरेका थिए।पटक-पटक ब्ल्या’कमेल गरी ठ’गीको अ’भियोगमा शाहीलाई बिहीबार काठमाडौंको कोटेश्वरबाट प’क्राउ गरी ठ’गीसम्बन्धी क’सुरमा मु’द्दा चलाउन महानगरीय प्रहरी परिसरमा पठाइएको अ’पराध महाशाखाले जनाएको छ।